Election အီဒီယံအသုံးအနှုန်းများ (၅)
ဒီတပတ် English Learning: America Idioms and Expressions ကဏ္ဍမှာ ရွေးကောက်ပွဲ (Election) နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အီဒီယံအသုံးအနှုန်းများဖြစ်တဲ့ Stump speech, Smear campaign နဲ့ Mudslinging တို့ကို တင်ပြထားပါတယ်။
(၁) Stump speech
Stump (သစ်ငုတ်တို)၊ Speech (မိန့်ခွန်း) တို့ဖြစ်ပြီး စကားစုတခုလုံးရဲ့  တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပါယ်က သစ်ငုတ်တို မိန့်ခွန်း ဖြစ်ပါတယ်။ ရှေးတုန်းကကျေးလက်ဒေသတွေမှာ နိုင်ငံရေးသမားတွေက လှည့်လည်မဲဆွယ်ရာမှာ လူအုပ်ကြီးကို မိန့်ခွန်းပြောဆိုတဲ့အခါ လူတွေမြင်နိုင်ကြားနိုင်အောင် သစ်ငုတ်တိုပေါ်တက်ပြီး မိန့်ခွန်းပြောရာကနေ ဒီအသုံးအနှုန်း ဆင်းသက်လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကနေ့မှာတော့ တကယ် သစ်ငုတ်တိုပေါ်တက်ပြီး ပြောတာမဟုတ်တော့ပေမယ့်လဲ တပြည်နယ်နဲ့ တပြည်နယ် လှည့်လည်သွားလာပြီး မဲဆွယ်လှုပ်ရှား မိန့်ခွန်းပြောဆိုတာမျိုးကို ရည်ညွှန်းသုံးပါတယ်။ ဒီအသုံးရဲ့  အီဒီယံအဓိပ္ပါယ်ကတော့ ပြည်နယ်တွေ၊ မြို့ တွေကိုလှည့်လည်ပြီး မဲဆွယ်မိန့်ခွန်းပြောတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဥပမာကို လေ့လာကြည့်ရအောင်ပါ။
သမ္မတကိုယ်စားလှယ်လောင်း နှစ်ဦးတို့ကတော့ နိုင်ငံအနှံ့ရွေးကောက်ပွဲ မဲဆွယ်လှုပ်ရှားတဲ့ မိန့်ခွန်းတွေကို ပြောနေကြလေရဲ့ ၊ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပဖို့ကလည်း သတင်းပတ် အနည်းငယ်ဘဲလိုတော့တယ်။
(၂) Smear campaign
Smear (နံမည်ဖျက်တာ၊ နံမည်ပျက်စေတာ), Campaign (လှုပ်ရှားမှု) တို့ဖြစ်ပြီး စကားစုတခုလုံးရဲ့  တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပါယ်က နံမည်ဖျက်တဲ့ လှုပ်ရှားမှု ဖြစ်ပါတယ်။ အီဒီယံအဓိပ္ပါယ်ကလည်း သိပ်မကွာလှပါဘူး။ တဖတ်ပြိုင်ဖက်ကို အပုပ်ချတဲ့၊ နံမည်ပျက်စေတဲ့၊ အသရေပျက်စေတဲ့၊ အကြည်ညိုပျက်စေတဲ့ ပြောဆိုမှုတွေ ပြုလုပ်တာမျိုးကို ဆိုလိုပါတယ်။ ဒီအသုံးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဥပမာကို လေ့လာကြည့်ရအောင်ပါ။
A weaker candidate usesasmear campaign to confuse voters about the opponent’s reputation.
အားနည်းတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း တဦးအနေနဲ့ သူ့ပြိုင်ဘက် ကျင့်ဝတ်သိက္ခာနဲ့ ပတ်သက်လို့ မဲဆန္ဒရှင်တွေ တွေးဝေသွားအောင် အပုပ်ချပြောဆိုတဲ့ လှုပ်ရှားမှုကို သုံးလေ့ရှိတယ်။
တခါတရံလည်း Smear campaign ကို Negative campaign လို့လည်း သုံးလေ့ရှိပါတယ်။ (အနုတ်လက္ခဏာဆောင်တယ်) လို့ အဓိပ္ပါယ်ရတဲ့ Negative ဝေါဟာရနဲ့ သုံးလေ့ရှိတာပါ။ အထူးသဖြင့် TV ကြော်ငြာတွေမှာ ဟိုဘက်ပြိုင်ဖက် ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ ဘယ်လိုမျိုးပြောတယ်၊ ဘယ်လိုမျိုးလုပ်တယ် စသဖြင့်တို့ စွပ်စွဲပြောဆိုတာမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။
Mud (ရွှံ့ )၊ Slinging က Sling (ပစ်ပေါက်တာ) ဖြစ်ပြီး စကားစုတခုလုံးရဲ့  လုံးကောက်အဓိပ္ပါယ်က ရွှံ့ နဲ့ ပစ်ပေါက်တာ၊ ရွှံ့ နဲ့ပက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် စောစောက Negative campaign က မကောင်းသတင်း၊ ကဲ့ရဲ့ ခံရတဲ့သတင်းမျိုး လွှင့်ရာကနေ မြန်မာစကားအရဆို ပွဲကြမ်းလာတဲ့ သဘောမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ရွှံ့ နဲ့ ပစ်ပေါက်တယ်လို့တင်စားပြီး၊ တဖက်လူသိက္ခာကျရလေအောင် အထင်အမြင်အသေးခံရလေအောင် ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်း စွပ်စွဲပြောဆိုချက်တွေကို ပြုလုပ်လာတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဥပမာကို လေ့လာကြည့်ရအောင်ပါ။
Politicians should avoid mudslinging. Voters don’t want to hear any of it.
နိုင်ငံရေးသမားတွေအနေနဲ့ တဖက်နဲ့တဖက် ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်း ပြောဆိုစွပ်စွဲမှုတွေ မလုပ်သင့်ပါဘူး။ မဲဆန္ဒရှင်တွေက အဲဒါမျိုးကို မကြားချင်ကြဘူး။
ဒီသတင်းပတ် တင်ပြပေးခဲ့တဲ့ Election နှင့် ပတ်သက်တဲ့ အီဒီယံအသုံးအနှုန်းတွေက Stump speech, Smear campaign နဲ့ Mudslinging တို့ ဖြစ်ကြပါတယ်။